PVC Dual Pipe Extrusion Mutsetse - China PVC Dual Pipe Extrusion Line Mutengesi, Fekitori -Jwell
Inoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvepombi dhayamita uye goho, kune maviri marudzi eSJZ80 uye SJZ65 yakakosha mapatya-sikuru extruders sarudzo; iyo mbiri pombi kufa zvakaenzana inogovera izvo zvinobuda, uye iyo pombi extrusion kumhanya inokurumidza kupurasitiki;
Yakakwira-inoshanda yakapetwa-yekumberi kutonhora bhokisi inogona kudzorwa zvakasiyana, uye iyo yekugadzirisa mashandiro iri nyore mune yekugadzira maitiro.
Isina guruva yekucheka muchina, kaviri chiteshi yakazvimirira kutonga, kumhanya nekukurumidza, chaiyo yekucheka kureba. Pneumatically anotenderera anosungisa anobvisa kudiwa kwekuchinja zvisungo. Iine chamfering chishandiso sarudzo.